New Milestone Muedzo weVarwere vane COPD |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Milestone Muedzo weVarwere vane COPD
Nuvaira, mugadziri wemanoveli ekurapa maitiro ekurapa zvirwere zvemapapu, akazivisa matanho maviri ekurapa. Varwere mazana maviri vakarapwa muAIRFLOW-200 muyedzo wakakosha, yekutanga kupindira COPD kuyedza kutarisa kuderedzwa kweCOPD exacerbations seyekutanga kupera. Pasi rose, varwere mazana matatu vakagamuchira dNerva® Targeted Lung Denervation (TLD) kurapwa mumakiriniki mashanu ekuedzwa.
dNerva® TLD chirongwa chebronchoscopic chinovhiringa pulmonary nerve kupinza kumapapu kuderedza mhedzisiro yekiriniki yeneural hyperactivity. Mechanistically yakafanana neanticholinergics (iyo kirasi huru yemishonga yeCOPD) inotorwa zuva nezuva kugadzirisa zviratidzo, iyo imwe-nguva dNerva maitiro ane mukana wekudzikisa kuwedzera kwenjodzi, kunatsiridza zviratidzo, uye kudzikamisa basa remapapu.
Kurapwa kwe300th dNerva TLD kwakaitika mwedzi uno. Dr. Gerard Criner, Sachigaro uye Purofesa, Thoracic Medicine uye Surgery paLewis Katz School of Medicine paTemberi University akabata varwere ve20 mu AIRFLOW-3 kuedza. "Kana tikakwanisa kubatsira varwere kudzikamisa zviratidzo zvavo zveCOPD uye kuvachengeta kunze kwechipatara, izvo zvichabatsira varwere, vanovachengeta, uye kuderedza mutoro pahurongwa hwehutano zvakare" akadaro. Kuwedzera kweCOPD kunomiririra zvingangoita zvikamu zviviri muzvitatu zvemutengo wakakwana wekuchengetwa kweCOPD, inofungidzirwa pamadhora 49B pagore muUS.
Mwedzi uno zvakare unoratidza chiitiko chakakosha chekurapa muyedzo yeAIRFLOW-3. Prof. Pallav Shah, Chiremba weChiremba paChelsea & Westminster neRoyal Brompton Hospitals muLondon uye Purofesa weRespiratory Medicine paImperial College ndiye ari kutungamira mukuedzwa. Akaita chirongwa che200th AIRFLOW-3 mumurwere ane mwero-kusvika-yakanyanya COPD, mutoro wechiratidzo chepamusoro, uye nhoroondo yekuwedzera kweCOPD pasinei nekurapa kwakakwana. "Varwere vazhinji veCOPD vanotambura nehurombo hwehupenyu nekuda kwekudzokororwa kweCOPD exacerbation" akadaro. "Kuyedzwa kweAIRFLOW-3 mukana unonakidza wekuongorora nzira yenguva imwe chete yekurapwa kunze iyo inogona kuderedza zvakanyanya kuwedzera kweCOPD nekuvandudza kugadzikana kwekiriniki."
Kambani nguva pfupi yadarika yakawana imwe madhora miriyoni makumi mashanu echikwereti uye mari yakaenzana neInnovatus Capital Partners, LLC, iyo ichashandiswa kupedza kuyedza kweAIRFLOW-50 uye kuwana mvumo yeUS FDA.
kambani London mushonga
Angela Downey anoti:
Ndira 26, 2022 pa12: 42
Ndiri humbowo hwekuti unogona kugara zvakanaka neCOPD. Ndine emphysema, asi emphysema handina. Mushure memakore ekurarama nechirwere chinobstructive pulmonary chirwere (COPD). Ndakaporeswa COPD zvakasikwa nekushandiswa kweWorld Rehabilitate Clinic Herbal formula, Nenguva yemavhiki matatu ndakanga ndichipora. Muna 3 ndakatanga kushandisa world Rehabilitate Clinic Herbal formula. Vanonyanya kurapa mukati uye mumapapu. Zvakakoshawo kuti udzidze zvakawanda sezvaunokwanisa nezvechirwere chako. Tsvaga sarudzo dzekushanya ( worldrehabilitateclinic.com.